WinKings ikozvino yavapo pane iyo Steam chitoro | Linux Vakapindwa muropa
WinKings yave kuwanikwa kurodha pasi kubva kune yakakurumbira Valve chitoro, Steam. Iyo inonakidza kwazvo 2D papuratifomu mutambo uyo unowanikwa kune edu anodikanwa ekushandisa system Iyo yakagadzirirwa kutamba zvese zviri zvega uye mumapoka anosvika mana vatambi. Iyo yakavakirwa pane inonakidza katuni kubva kuViking zera, iine kubata kweyekufungidzira uye akawanda maviri-mativi mapuratifomu ayo iwe uchafanirwa kupasa nhanho nhanho, uye mauri umo iwe uchawana zvinetswa uye vavengi nazvo zvekurwa nazvo.
WinKings inosanganisira 4 viking vatambi zvakasiyana kusarudza kubva, nezvombo zvinopfuura gumi zvakasiyana zvinozokubatsira munyaya yese, senge pfuti, pfuti, pfuti, maroketi emabhomba, magirinedhi, vapfuri vemoto, katanas, nezvimwe. Sezvauri kuona, zvishandiso zvaunazvo zvishoma "zvemberi" zvenguva iyo nyaya yacho yakavakirwa, asi izvi zvichave zvishoma kana iwe ukatanga kuona zvakanakira uyu mutambo wevhidhiyo. Kunyanya kana iwe uchitarisa kupasa nyika nhanhatu dzinowanikwa nematanho anopfuura makumi maviri ...
Kana iwe usiri kuda kupasa aya mazinga nekuti iwe unogona, unogona kutamba mukati mushandirapamwe modhi, mune imwechete player modhi kana muvazhinji mode, kugona kusarudza pakati peyakareruka, yakajairwa, yakaoma uye Viking kuoma. Pakupedzisira, iwe unogona zvakare kusarudza pakati pevapikisi mode, maunogona kutarisana 2 kusvika 4 kana kusvika kuXNUMX mune Multiplayer modhi. Mune ino yekupedzisira modhi iwe unogona zvakare kusarudza pakati pematanho akasiyana senge Rufu mutambo, Headhunter uye Mureza Kutora Zvese kuitira kuti usazobhowekana kana wawana uyu mutambo wevhidhiyo.
Kana ari system zvinodiwa, iwe unofanirwa kuve uine inotsigirwa Ubuntu vhezheni (10.10 kana yepamusoro, uye mamwe akafanana distros), uye kudiwa kwemahara zviwanikwa hakuna kunyanya kukwirira, saka haufanire kunetseka nezvazvo. Iine 512MB ye RAM, mbiri-musimboti microprocessor, chero giraidhi kadhi, 600MB yeinowanikwa hard disk uye giraidhi kadhi inokwana. Kana iwe ukasangana navo uye uchida kuwana uyu mutambo, unogona kuuwana ne 30% kuderedzwa kusvika Mbudzi 4.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » WinKings ikozvino inowanikwa pane iyo Steam chitoro
Arch Linux 2016.11.01 ikozvino yawanikwa kurodha pasi